IAeromonas | Ngeentlanzi
UViviana Saldarriaga | | Amanzi akwariyam akwariyam, Izifo zentlanzi
IAeromonas Ziyibhaktheriya echaphazela kakubi impilo yeentlanzi zasemanzini.
Zimbini iintlobo zeeromonas: i-salmonicida aeromonas kunye nehydrophila aeromonas.
UAeromonas Salmonicida: Olu hlobo lweebhakteria lubonakala ngokubangela ukopha kwiimisipha zentlanzi yakho kunye nokudumba kolusu lwesilwanyana. Ngokufanayo, iintlanzi zinokuqalisa ukopha esitulweni. Kubalulekile ukuba sikhathalele ngokukhethekileyo iintlanzi ezinesi sifo, kuba ukuba azinyangeki zingafa kwisithuba seentsuku ezi-2 ukuya kwezi-3.
UAeromonas hydrophilaOlu hlobo lweeeromonas alunakwenza ukuba iintlanzi ezihlala emanzini zigule kuphela, kodwa zenze izilwanyana ezirhubuluzayo, izilwanyana eziphila emanzini nasemanzini kunye nezilwanyana ezanyisayo zigule, ke kubalulekile ukuba uqaphele zonke iimpawu zokubonakala kwesi sifo. Zimbini iintlobo zosulelo: usulelo lwangaphakathi olwenzeka emzimbeni wesilwanyana, umzekelo kwizintso, apho kugcinwa khona ulwelo olwenza ukudumba kwesisu; kwaye zangaphandle zibonakaliswa kukungunda kwamaphiko okuzibonakalisa, ekuqaleni ngokurhawuka kwamaphiko ade aphele ngokupheleleyo.
Ukunyanga olu hlobo lweebacteria kubalulekile ukuba siluphucule iimeko zamanzi ziphi izilwanyana zethu. Ungayiphucula njani? Inxalenye kunye notshintsho rhoqo lwamanzi lunokwenziwa, ukuzama ukondla izilwanyana ngokutya okuphilayo kunye nokusebenzisa izongezo zeevithamini. Ngokufanayo, kwiimeko ezigabadeleyo, i-antibiotics ingasetyenziselwa ukunyanga iintlanzi. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba le ntsholongwane iyanyangeka kwi-penicillin, ke kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe olunye uhlobo lwee-antibiotics ezenziwe nge-sulfonamides, i-oxytetracycline okanye i-chloramphenicol.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » IAeromonas